Laga yaabaa 2018 | Save A tareenka
Month: Laga yaabaa 2018
Home > Laga yaabaa 2018
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Ku safrid tareen noqon kartaa mid ka mid ah siyaabaha ugu nasasho iyo raaxo leh si aad u hesho agagaarka. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo sameeyo fiican ka soo guura oo noqon smart. In si fiican u habaysan oo ogaa waxa waxa ay waddada u xaareysaa samaynta…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo tareenada Swiss yihiin kuwa ugu fiican Europe sida ay sheegtay Boston Consulting Group ee. First of dhan, Swiss ku gaari ratings sare inkastoo ay hoos u tayo. Swiss ayaa gaari a 7.2 guud rating baxay 10. halka Denmark, Finland, iyo Germany oo dhan gaari a 6+ rating. mida…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waxaa la sheegay in laga yaabo in Switzerland waxaa ugu fiican u yaqaan for danbow ay baraf iyo shukulaatada delicious, laakiin waxaa jira wax badan oo dheeraad ah si dalka u qurux badan oo la kulmay isha. Saffarada tareenka ee Switzerland ayaa ka mid ah hababka ugu fiican ee ku raaxaysan baadiyaha qurux badan….
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo cuntada ugu fiican in la cuno tareenada maalmahan waa run ahaantii aad u delicious. Maxaa yeelay, tareenada badan bixiyaan guri 5-star iyo cuntada heerka koowaad. Tan waxaa ku jira cuntada by dabaakhyo caanka ah ee dunida lagu sameeyo. Waxaa laga yaabaa inaad u baratay inaad wax ka akhrisatid cuntada cajiibka ah ee tareenada laga raaco ama adiga kuu muuqda…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Italy ayaa qaar ka mid ah safarada tareen cajiib ah. Waxay leedahay tiro ka mid ah tareenada qurux badan iyo saldhigyada fiican dalka oo dhan, laakiin meesha waxaa safar ugu horeysay tareen sameeyay ee Italy? Maqaalkan waxaa loo qoray inuu wax ka barto safarka Tareenka waxaana sameeyay Save A…